Jenesis 13 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
13 Ebram wee kwapụ n’Ijipt, ya na nwunye ya na ihe niile o nwere, tinyere Lọt, wee gaa Negeb.+ 2 Ebram nwekwara ìgwè anụ ụlọ na ọlaọcha na ọlaedo dị ukwuu.+ 3 O wee si na Negeb kwapụ, na-ama ụlọikwuu n’ebe dị iche iche, wee garuo Betel, n’ebe ọ mara ụlọikwuu na mbụ n’agbata Betel na E-aị,+ 4 n’ebe o wuru ebe ịchụàjà na mbụ;+ Ebram wee kpọkuo aha Jehova+ n’ebe ahụ. 5 Lọt, bụ́ onye ya na Ebram so na-aga, nwekwara atụrụ na ehi na ụlọikwuu. 6 Ya mere, ala ahụ abaghị ha niile ibikọta ọnụ, n’ihi na akụ̀ ha adịwo ọtụtụ, ha niile enweghịkwa ike ibikọta ọnụ.+ 7 E wee nwee esemokwu n’etiti ndị na-azụrụ Ebram anụ ụlọ na ndị na-azụrụ Lọt anụ ụlọ; ndị Kenan na ndị Perizaịt bi n’ala ahụ+ n’oge ahụ. 8 Ebram wee sị Lọt:+ “Biko, ka mụ na gị nakwa ndị na-azụrụ m anụ na ndị na-azụrụ gị anụ ghara ịnọ na-ese okwu, n’ihi na anyị bụ ụmụnne.+ 9 Ọ̀ bụ na ala a dum adịghịrị gị? Biko, kwapụ n’ebe m nọ. Ọ bụrụ na ị gaa n’aka ekpe, mụ onwe m ga-aga n’aka nri; ma ọ bụrụ na ị gaa n’aka nri, mụ onwe m ga-aga n’aka ekpe.”+ 10 Lọt wee lelie anya hụ Ógbè Jọdan+ dum ruo Zoa.+ Ọ hụrụ na ógbè ahụ dum bụ ebe mmiri na-ede nke ọma dị ka ubi Jehova,+ dị ka ala Ijipt, tupu Jehova ebibie Sọdọm na Gọmọra. 11 Lọt wee họrọ Ógbè Jọdan ahụ dum, Lọt wee kwaga n’ebe ọwụwa anyanwụ. Ha abụọ wee kewaa. 12 Ebram wee biri n’ala Kenan, ma Lọt gara biri n’etiti obodo ndị dị n’Ógbè Jọdan.+ N’ikpeazụ, ọ mara ụlọikwuu n’ebe dị nso na Sọdọm. 13 Ndị Sọdọm dị njọ, ha na-emekwa mmehie dị oké njọ megide Jehova.+ 14 Jehova wee gwa Ebram mgbe Lọt kwapụsịrị n’ebe ọ nọ, sị: “Biko, lelie anya, si n’ebe ị nọ lee anya n’ebe ugwu nakwa n’ebe ndịda nakwa n’ebe ọwụwa anyanwụ nakwa n’ebe ọdịda anyanwụ,+ 15 n’ihi na ala a dum ị na-ele anya, ọ bụ gị na mkpụrụ gị ka m ga-enye ya ruo mgbe a na-akaghị aka.+ 16 M ga-emekwa ka mkpụrụ gị dịrị ka ájá dị n’ala, nke mere na, ọ bụrụ na mmadụ enwee ike ịgụta ájá dị n’ala ọnụ, a ga-enwe ike ịgụta mkpụrụ gị ọnụ.+ 17 Bilie, gagharịa n’ala a, gazuo ogologo ya, gazuokwa uhiè ya, n’ihi na ọ bụ gị ka m ga-enye ya.”+ 18 Ebram wee na-ebi n’ụlọikwuu. E mesịa, ọ bịara biri n’etiti osisi ukwu ndị dị na Mamri,+ bụ́ ndị dị na Hibrọn;+ ọ bụ n’ebe ahụ ka o wuuru Jehova ebe ịchụàjà.+